DHAGEYSO: Indhacadde oo shaaciyey Sababta loogu magacaabi la’yahay xil muhiim ah” Sir badana ka shifay..? | Garqaad News Agency
DHAGEYSO: Indhacadde oo shaaciyey Sababta loogu magacaabi la’yahay xil muhiim ah” Sir badana ka shifay..?
General Yuusuf Maxamed Siyaad (Indhacadde) oo ka tirsan Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka, ayaa markii ugu horeysay ka hadlay sababta ay xil muhiim ahi dowladdu ugu magacaabi la’dahay.
General Yuusuf Maxamed Siyaad oo hadda ku magacaaban Gudoomiyaha Guddiga Hanti Soo Celinta ee Ciidanka Xoogga Dalka, ayaa wareysi uu siiyay Telefishinka Horn Cable wax looga weydiiyay waxa sababay inaanay dowladdu xil sare u magacaabin.
“Horta xilka Ilaahay baa bixiya ee qof ma bixiyo. Naceyb iyo dhib aniga xageyga oo dowladda ay ii qabtana ma jirto. Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha hadda joogga iyo kuwii horeba aad bay ii qadarin jireen, kuwaana way i qadariyan, laakiin waxaan leeyahay Ilaahay iima qadarin.” Ayuu yiri General Yuusuf Maxamed Siyaad.
General Indhacadde, ayaa ku waramaya in markasta uu Alle weydiisto in wixii khayr ah uu waafajiyo, wixii shar ugu jirana uu ka duwo, isla-markaana uu aaminsan yahay in xil muhiim ahi uu dhibaato uun kala maqan yahay.
“Ilaahay waxaan ka baryaa oo weydiisanaa, markastana aan ka baryaa wixii aan khayr ii ahayn oo shar ii leh inuu Ilaahay iga xijaabo, wixii khayr ahna uu ii saqiro. Wixii iga maqan khayr baysan ii ahayn, sidaas ayaan aaminsanahay, Ilaahayna waan uga mahadcelinayaa. Madaxda dalkuna ima necba, aad bay ii qadariyan.” Ayuu yiri General Indhacadde.
Su’aal ahayd inay madax dowladda isu fiican yihiin, ayuu yiri “Aad baan isugu fiicanahay boqolkiiba boqol (100%).
Su’aal kale oo ahayd in dadka qaarkii ay u arkaan inuu ku wanaagsan la dagaalanka Al Shabaab, sababta looga dhigi kari waayay hoggaanka sare ee ciidamada la dagaalamaya Shabaabka, ayaa ku hakaday in dad isaga kaga wanaagsan loo dhiibay xilkaasi.
General Indhacadde oo ka jawaabayay su’aal u dhaceysay waxa muddooyinkii dambe uu isu gaabiyay, ayaa ku andacooday in dalka ay dowlad ka jirto, taa oo leh sida uu sheegay maamulka iyo bwaajibaadka shaqo, hadana uu hayo shaqadii ay dowladdu u dirtay.